Onium inj(Tiemonium methylsulphate) – Online Myanmar Pharmacy
Onium inj(Tiemonium methylsulphate)
Onium inj(Tiemonium methylsulphate) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
အိုနီယမ်ဆေးသည် ကိုယ်တွင်းကလီစာများ၏ကြွက်သားများကိုပြေလျော့စေပါသည်။ အိုနီယမ်ဆေးကို ဝမ်းလျှောလျှင်အူလမ်းကြောင်းတလျှောက် ကြွက်သားများတောင့်တင်းခြင်းကြောင့်ဗိုက်နာခြင်း ၊ သည်းခြေလမ်းကြောင်းတောင့်တင်းနာကျင်ခြင်း၊ဆီအိမ်ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း ၊ဓမ္မတာလာစဥ ်နာကျင်ခြင်း ၊ သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်းကြောင့်နာကျင်ခြင်း တို့ကိုကုသရန်အသုံးပြုပါသည်။
Onium (Tiemonium Methylsulphate INN) is an antispasmodic drug. It reduces muscle spasms of the intestine, biliary system, bladder and uterus. Onium (Tiemonium Methylsulphate INN) is indicated for pain in gastrointestinal and biliary diseases and in urology and gynaecology such as Gastroenteritis, Diarrhoea, Dysentery, Biliary Colic, Enterocolitis, Cholecystitis, Colonopathies, Mild Cystitis and Spasmodic Dysmenorrhoea.